Shaqaalaha Apple waxay rabaan inay guriga kasii shaqeeyaan | Waxaan ka socdaa mac
Shaqaalaha Apple waxay rabaan inay ka sii shaqeeyaan guriga
Maalmo ka hor, Tim Cook wuxuu qoraal u diray shaqaalihiisa oo uu weydiisanayo inay la shaqeeyaan dib ugu noqo shaqada xafiisyada laga bilaabo Sebtember oo ku saleysan dabacsan, iyadoo ugu yaraan 3 maalmood usbuucii. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in codsigan aysan sifiican u soo dhaweyn shaqaaluhu, kuwaas oo jawaab u diray hadaladooda.
Jawaabta codsigii Tim Cook ayaa noqotay ay saxiixeen in kabadan 80 qof waxaana ka soo muuqday kanaalka gudaha ee Slack, kanaal ay ka shaqeeyaan in ka badan 2.800 oo shaqaale Apple ah, sida uu qoray wargayska Verge. Inkasta oo shaqaalihii matalayay ay qaddariyeen in Apple ay tixgelinayso qaab isku dhafan oo loogu talagalay shaqada xafiiska, waxay yiraahdaan xalka la soo jeediyay ayaan si ku filan wax uga qabanayn baahidooda.
Wixii Apple ah, oo xooga saaraya kaqeybgalka qofka, jadwalka isku-dhafan waxay ka dhigan tahay ka weecashada siyaasadaha dayactiray muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, shaqaalaha leh taleefoonka muddo ka badan hal sano waxay dareemayaan in tabashooyinkooda iyo rabitaankooda aan la tixgelin.
Siyaasadda debecsan ee talo-siinta shirkadda Apple, iyo isgaarsiinta ku xeeran, waxay durba ku qasabtay qaar ka mid ah asxaabteena inay is casilaan. Iyadoo aan la helin ka-mid-ahaanshaha ay dabacsanaantu keento, in badan oo naga mid ahi waxay dareensan yihiin inay tahay inaan kala dooranno isku-darka qoysaskeenna, fayoobaantayada, iyo inaan awoodno inaan qabanno shaqadeenna ugu wanaagsan, ama ka mid noqonno Apple.
Bayaanka, waxaa muuqata inay jiraan a goynta ka dhexeeya shaqaalaha Apple iyo maareeyayaasha. Saxiixayaashu waxay wax ka qabanayaan dhibaatadan waxayna soo jeedinayaan in wada tashiga ay keeni karto faa iidooyin la mid ah kulamada fool ka foolka ah.
Sannadkii la soo dhaafay waxaan dareemay oo keliya maqal la'aan, laakiin mararka qaarkood si firfircoon ayaa loo iska indhatiray. Fariimaha sida 'waxaan ognahay in inbadan oo idinka mid ah ay rajeynayaan inay si shaqsi ah ula xiriiraan asxaabtaada xafiiska', iyadoon wax fariin ah qiraynin inay jiraan shucuur is khilaafsan oo toos ah oo inaga dhaxaysa, waxay dareemayaan sharaf dhac iyo wax aan jirin.
Inbadan oo naga mid ah ma ahan oo kaliya inaan sifiican u dareemeyno inaan ku xirneyn asxaabteyda adduunka, laakiin waxaan sifiican ugu xirneyn waligey. Waxaan u nimid inaan rabno inaan u shaqeyno sida aan hadda u shaqeyno, iyadoo aan loo baahnayn maalin kasta inaan dib ugu laabanno xafiiska.
Waxay u muuqataa inuu jiro kala-goyn u dhaxeysa habka kooxda fulinta ay uga fikiraan dabacsanaanta wada xiriirka / goobta iyo khibradaha qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha Apple.
Shaqaalaha Apple ayaa sheeganaya taas shaqada telefonku waxay keentaa shan faa iidooyin muhiim ah:
Kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada haynta iyo shaqaalaynta.
Burburinta caqabadihii horay u jiray ee isgaarsiinta.
Isku dheelitirka nolosha shaqada oo kafiican
Isdhexgalka wanaagsan ee shaqaalaha dabacsan / durugsan ee jira.
Yaraynta faafida cudurada.
Shaqaaluhu waxay codsadaan Apple:
Waxaan si rasmi ah u codsaneynaa in Apple ay tixgeliso shaqada fog iyo go'aamada dabacsanaanta goobta sida ismaamul ahaan koox ahaan sida go'aamada shaqaalaynta.
Waxaan si rasmi ah u codsaneynaa xog-ururin gaaban oo soo noqnoqota oo guud ahaan shirkad leh oo si cad loo qaabeeyey lana socodsiinayo habka isgaarsiinta / jawaab celinta ee shirkadda guud ahaan, urur ahaan, iyo heer kooxeed, oo ka hadlaysa mowduucyada hoos ku taxan.
Waxaan si rasmi ah u codsaneynaa in su'aasha ku saabsan wareejinta shaqaalaha sababo la xiriira isgaarsiinta lagu daro wareysiyada laga baxo.
Waxaan si rasmi ah u codsaneynaa qorshe ficil oo hufan oo ficil ah oo lagu waafajinayo naafonimada iyada oo loo marayo goobta, goobta, meelaha fog, isku dhafan, ama haddii kale shaqada goobta jilicsan.
Waxaan si rasmi ah u codsaneynaa in saameynta deegaanka ee ku noqoshada shaqada fool-ka-fool la darso iyo sida dabacsanaanta goobta fog iyo tan joogtada ah ay u saameyn karto saameyntaas.
Waa in la xusuusnaado in Apple uu ka mid yahay shirkadaha yar yar ee Silicon Valley ma qaadan shaqo fog sidii caadada u ahayd, wax ay sameeyeen shirkadaha kale ee waaweyn sida Google, Facebook iyo Microsoft (in kasta oo ta dambe aysan ku jirin Silicon Valley).
Haddii soo jeedinta shaqaalaha Apple Park ay socoto, maalgashiga millionaire ee Apple lagu fuliyay dhismaha xarumahan, waxay noqon doontaa mid aan haba yaraatee wax faa iido ah lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shaqaalaha Apple waxay rabaan inay ka sii shaqeeyaan guriga
Waxaa laga yaabaa inaan ku haysanno barnaamij "Mind" cusub oo ku jira watchOS 8
Mercedes-Benz waxay Apple Music ku daraysaa moodooyinka C-Class iyo S-Class